Otú Unu Ga-esi Na-ekpebi Ihe Ga-adị Unu Abụọ Mma | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
ISIOKWU TETA! A Ihe Na-eme Ka Mmadụ Nwee Obi Ụtọ
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ịdị Ọcha
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Ihe Ị Ga-eme ma Nwa Gị Na-agha Ụgha
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ụwa
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Unu Ga-esi Na-ekpebi Ihe Ga-adị Unu Abụọ Mma
‘Ihe Ncheta Pụrụ Iche’
Teta! | Jenụwarị 2015
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
IHE BỤ́ NSOGBU
Ka e were ya na e nwere ihe gị na di * gị chọrọ ime, ma otú i si chọọ ime ya dị iche n’otú di gị si chọọ ime ya. I nwere ike ime otu n’ime ihe atọ a:
Isi ọnwụ na unu ga-eme ya otú i si chọọ.
Ikweta ime ya otú di gị kwuru.
Unu ikweta ime ya otú ọzọ dị iche n’ihe unu abụọ chọrọ.
I nwere ike ikwu na ị chọghị ka e mee ya otú ọzọ n’ihi na otú a ga-esi eme ihe ahụ agaghịzi abụ ma otú ị chọrọ ma otú di gị chọrọ.
Ọ bụrụ na otú ọzọ ahụ unu chọrọ isi mee ihe ahụ dị mma, unu abụọ ga-enwe obi ụtọ. Ma, tupu anyị ekwuwe otú ị ga-esi na-ekweta ime ihe dị iche n’ihe unu chọrọ, ka anyị tụlee ihe ụfọdụ i kwesịrị ịma.
Unu kwesịrị ịgbakọ aka kpebie ihe unu ga-eme. Tupu ị lụọ di, ọ bụ gị na-ekpebiri onwe gị ihe ọ bụla ị ga-eme. Ma ugbu a, ihe agbanweela. Unu abụọ ga na-emezi ihe ga-eme ka unu ghara itisa. Kama ichewe na unu abụọ ịnọ kpawa ihe unu ga-eme bụ igbu oge, cheta na ọ ga-abara unu uru. Otu nwaanyị aha ya bụ Alexandra kwuru na ọ ka mma ka mmadụ abụọ tikọọ isi chọta otú a ga-esi dozie nsogbu kama otu onye ịchọwa ya naanị ya.
Unu kwesịrị iji obi ọcha kwurịta ihe unu ga-eme. Otu ọkachamara aha ya bụ John M. Gottman kwuru na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ihe ọ bụla di mmadụ ma ọ bụ nwunye ya kwuru ka ọ ga-ekweta, onye ahụ kwesịrị ikwu obi ya banyere okwu ha kpụ n’ọnụ. O kwukwara na ọ bụrụ na mmadụ anaghị etinye ọnụ n’ihe di ya ma ọ bụ nwunye ya na-ekwu ma ha chọọ ịkpa ihe dịịrị ha, e nweghị ezigbo ihe ha ga-akpata.
Unu kwesịrị ileghara ụfọdụ ihe anya. E nweghị onye obi na-adị ụtọ ma di ya ma ọ bụ nwunye ya na-esi ọnwụ na a ga-eme ihe ọ bụla o kwuru. Ọ na-aka mma ma ọ bụrụ na ha abụọ na-ekwe ka e megbuo ha mgbe ụfọdụ. Otu nwaanyị aha ya bụ June kwuru, sị: “Oge ụfọdụ, m na-eme ihe di m chọrọ ka obi wee dị ya mma, yanwa na-emekwara m otú ahụ. Otú ahụ ka di na nwunye kwesịrị isi na-ebi, nwoke meere nwunye ya, nwaanyị emeere di ya.”
Jirinụ olu ọma bido. Ọ bụrụ na i jiri iwe ma ọ bụ olu ike gwawa di gị ihe i chere banyere ihe unu chọrọ ime, unu nwere ike ịrụwa ụka, unu agaghịkwa ekwute ihe ga-enwe isi. N’ihi ya, jiri olu ọma kwuo ihe ị chọrọ ikwu, meekwa ihe a Baịbụl kwuru. Ọ sịrị: “Yirinụ obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n’obi, ịdị nwayọọ, na ogologo ntachi obi, dị ka uwe.” (Ndị Kọlọsi 3:12) Ihe ndị a Baịbụl kwuru ga-enyere gị na di gị aka ka unu ghara ịna-arụ ụka. Ha ga-eme ka unu wetuo obi kpebie ihe unu ga-eme.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Kọlọsi 4:6.
Chọpụta ebe unu nwere otu olu. Ọ bụrụ na ọ na-abụ unu chọọ ikpebi ihe unu ga-eme unu amalite ise okwu, mara na o nwere ike ịbụ na onye ọ bụla n’ime unu na-achọ ka e mee ihe ọ chọrọ. Kama ịbụ ekwe ekwe, chọpụta ebe unu nwere otu olu. Ihe ndị a ga-enyere unu aka:
Onye ọ bụla n’ime unu dee ihe gbasara ihe unu na-akpa n’akwụkwọ. Depụta ihe ị na-achọghị banyere ihe ahụ n’aka ekpe. N’aka nri, dee ihe ndị i kwetara. Unu dechaa, kwurịtanụ ihe unu depụtara. I nwere ike chọpụta na unu nwere otu olu n’ime ọtụtụ ihe ndị unu dere unu ga-eme. Ọ gaghịkwa esiri unu ike ịgbanwe obi unu banyere ihe ndị unu na-ekwekọrịtaghị. Ọ bụrụgodị na unu agaghị ekwekọrịtacha n’ihe ahụ niile, ide ha n’akwụkwọ ga-enyere unu aka ịghọtakwu ihe ndị ahụ nke ọma.
Na-atụkọnụ aro ọnụ. O nwere ike ịdịrị otu onye mfe ịma ihe ọ ga-eme ma ihe ụfọdụ dapụta. Ma, e nwere ihe ụfọdụ nwere ike isiri di na nwunye ike ịma ihe ha ga-eme. Ụdị ihe a dapụta, ha kwesịrị ịgbakọ aka kpebie ihe ha ga-eme.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ekliziastis 4:9.
Abụla ekwe ekwe. Baịbụl kwuru, sị: “Onye ọ bụla n’ime unu hụ nwunye ya n’anya dị ka ọ hụrụ onwe ya n’anya; n’aka nke ọzọ, onye bụ́ nwunye kwesịrị ịdị na-akwanyere di ya ùgwù nke ukwuu.” (Ndị Efesọs 5:33) Ọ bụrụ na di na nwunye hụrụ ibe ha n’anya, na-akwanyekwara ibe ha ùgwù, ha ga na-ekweta ihe ibe ha kwuru. Otu nwoke aha ya bụ Cameron kwuru, sị: “O nwere ihe mmadụ na-agaghị achọ ime, ma nwunye ya ma ọ bụ di ya nwere ike ime ka o mee ya. E mechaa, obi ga-adịkwa ya ụtọ na o mere ihe ahụ.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jenesis 2:18.
^ para. 4 Ihe e kwuru n’isiokwu a gbasakwara ụmụ nwoke ndị lụrụ nwaanyị.
“Ka okwu unu dịrị n’amara mgbe niile, ka ọ bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ.”—Ndị Kọlọsi 4:6.
“Abụọ dị mma karịa otu.”—Ekliziastis 4:9.
“Ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọgide naanị ya. M gaje imere ya onye inyeaka, ka ọ bụrụ onye ga-eme ka o zuo ezu.”—Jenesis 2:18.
“Ọ bụrụ na mmadụ na-eme ihe ọ bụla ọ chọrọ n’egeghị di ya ma ọ bụ nwunye ya ntị, onye ahụ ga na-ebi ndụ ka onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye.”
“Di na nwunye chọọ ikpebi ihe ọ bụla, ha kwesịrị ịkpa ya akpa, obi adịkwa onye nke ọ bụla mma na ya kwuru uche ya tupu ha ekpebie ihe ahụ. Ime otú ahụ ga-eme ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ kama ịna-azọ onye nke a ga-eme ihe o kwuru.”
Gị na di gị ma ọ bụ gị na nwunye gị ọ̀ na-esekarị okwu? Gụọ ihe Baịbụl kwuru ga-enyere unu aka.
Ndị bụ́ di, ndị nwunye, ndị nne na nna, na ndị bụ́ ụmụ kwesịrị iṅomi otú Jizọs si hụ ndị ọzọ n’anya. Olee ihe anyị mụtara n’aka ya?
Jenụwarị 2015 | Ihe Na-eme Ka Mmadụ Nwee Obi Ụtọ
TETA! Jenụwarị 2015 | Ihe Na-eme Ka Mmadụ Nwee Obi Ụtọ